दम्पती बीमा गर्ने हो ? कुन बीमा कम्पनीमा गर्दा कति खर्च लाग्छ, के फाइदा हुन्छ ? (सूचिसहित) – Clickmandu
दम्पती बीमा गर्ने हो ? कुन बीमा कम्पनीमा गर्दा कति खर्च लाग्छ, के फाइदा हुन्छ ? (सूचिसहित)
सोभित थपलिया २०७६ साउन १८ गते १५:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीबन बीमा कम्पनीहरुले बिबाहित दम्पतीहरुलाई लक्षित गरेर दम्पती बीमा योजना ल्याउने होडबाजी नै गर्न थालेका छन् ।
एउटै बीमा योजनाले श्रीमान/श्रीमतिको जोखिम कभर गर्ने स्किम ल्याएर बिबाहित जोडीलाई आकर्षित गर्न बीमा कम्पनीहरु अग्रसर देखिएका हुन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गर्ने पोलिसिमध्येका धेरैले रुचाएको दम्पती बीमा योजना पनि हो । बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक सुरक्षाको निश्चितताले पारिवारिक जीवन सुखमय बनाउने भन्दै यो योजनालाई बिक्री गरिरहेका छन् ।
विभिन्न कम्पनीहरुले ल्याएको यो योजना किन्न चाहनेलाई न्यूनतम बीमाङक रकम ५० हजार रुपैयाँ भए पनि न्यूनतम प्रवेश उमेर भने फरक-फरक रहेको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन सारथी योजना रहेको छ । यो योजनमा सहभागी हुनको लागि ५ हजार न्यूनतम बीमाङ्क रकम रहेको छ । १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका बीमितले यो योजनामा सहभागी जनाउने छन् । यो योजनाको बीमा अवधि भने १५ देखि ३० वर्षको रहेको छ ।
यो योजनामा सहभागी बीमितले भुक्तानी पाउनको लागि बीमा अवधि सकिएको मितिसम्म दुवै बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क रकम र बोनस एकमुष्ट दिने छ । बीमा अवधिभित्र २ मध्ये १ बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी हुने र त्यसपछिको बीमा शुल्क भुक्तानीमा छुट पाइने छ । बीमा अवधि सकिएपछि जीवित बीमितलाई पुनः बीमाङ्क रकम र बोनस दिने बीमा समितिले जनाएको छ ।
१९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये दम्पती बीमा योजनामा सहभागी ५ वटा बीमा कम्पनीको मात्र तथ्याङक बीमा समिले उपलब्ध गराएको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले दम्पती अमृत योजना ल्याएको छ । यो योजनमा १८ वर्ष देखि ६० वर्षसम्मका बीमित सहभागी हुन पाउने छन् ।
न्यूनतम ५ देखि ३० वर्षको बीमा अवधि रहेको छ । यो योजनामा सहभागी हुनेले भुक्तानी पाउनको लागि बीमा अवधिभित्र २ मध्ये १ बीमितको मृत्य भएमा पुरै बीमाङ्क पाउने, बीमा अवधिभित्र अर्को बीमितको पनि मृत्यु भएमा थप पुरै बीमाङ्क रकम र बोनससमेत पाइने छ ।
यस्तै बीमा अवधि सकिने मितिसम्म २ मध्ये १ बीमितमात्र जीवित रहेमा थप पुरै बीमाङक रकम र बोनस पाइने छ भने बीमा अवधि सकिएको मितिसम्म दुवै बीमित जीवित रहेमा पुरै बीमाङ्क रकम र बोसन पाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
एशियन लाइफले पनि दम्पती सुरक्षा (संयुक्त सावधिक) जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । यो योजनामा सहभागी हुन चाहने बीमित १८ वर्ष भएको हुनुपर्ने छ भने अधिकतम ५० वर्ष रहेको छ । यो योजनामा न्यूनतम बीमा अवधि १५ वर्ष रहेको छ भने अधिकतम ३० वर्ष रहेको छ ।
अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर भने ६५ वर्ष रहेको छ । यो योजनामा सहभागी बीमितले भुक्तानी पाउन भने बीमा अवधिभित्र २ मध्ये १ बीमितको मृत्यु भएमा पुरै बीमा रकम, बीमा अवधि भित्र अर्को बीमितको पनि मृत्यु भएमा थप पुरै बीमाङ रकम र आर्जित बोनस पाउने छन् ।
यस्तै बीमा अवधि सकिने मितिसम्ममा २ मध्ये १ बीमितमात्र जीवित रहेमा थप पुरै बीमाङ्क रकम र आर्जिन बोनस पाउने तथा बीमा अवधि सकिको मितिसम्म दुवै बीमित जीवित रहेका पुरै बीमाङ्क रकम र बोनस पाउन सकिने छ ।
यतिमात्रै हैन एशियन लाइफले नै दम्पति सुरक्षा प्लस जीवन बीमा योजना पनि ल्याएको छ । यो योजनामा न्यूनतम १८ देखि अधिकतम ६५ वर्ष सम्मका बीमितले सहभागी हुनसक्छन् । न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ३० वर्ष अवधिसम्मको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यो योजनाको भुक्तानी पाउनको लागि बीमा अवधिमा २ मध्ये १ बीमितको मृत्यु भएमा बीमा सुरु भएको ५ वर्षभित्र मृत्यु भएमा बीमाङ्कको १०० प्रतिशत, बीमा सुरु भएको मितिले ६ देखि १० वर्षभित्र मृत्यु भएमा बीमाङ्कको १५० प्रतिशत, ११ देखि १५ वर्षमा मृत्यु भएमा २०० र १६ देखि ३० वर्षभित्र मृत्यु भएमा २५० प्रतिशत भुक्तानी पाउने छन् ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले जीवन साथी संयुक्त सावधिक बीमा योजना ल्याएको छ । यो योजनाको न्यूनतम बीमाङक रकम २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका दम्पती यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसको १५ वर्ष रहेको छ भने बमिा समाप्ति उमेर ७५ वर्ष रहेको छ ।
यो योजना परिपक्व भएपछि भुक्तानी लिनको लागि बीमा अवधिभर बीमित जीवित रहेको अवस्थामा बीमाङ्क रकम र बोनससमेत पाइने छ ।
यो योजनामा बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भई लाभ भुक्तानी भैसकेको अवस्थामा निजको श्रीमान÷श्रीमती बीमा अवधि समाप्तिसम्म जीवित रहेमा भने कुनै लाभ भुक्तानी नदिने जनाएको छ ।
बीमितको श्रीमान/श्रीमती जिवित भए आषमी बीमा शुल्कहरु मिनाहा हुने र बीमाङ्कको ५० प्रतिशत दिने जनाएको छ । बीमितको श्रीमान वा श्रीमतीको बीमितभन्दा अघि नै मृत्यु भएमा कुनै लाभ नपाउने जनाएको छ ।
बीमितको तथा नीजको श्रीमान/श्रीमतीको सँगै मृत्यु भएमा बीमालेख अन्तर्गतको बीमाङ्कको १५० प्रतिशत लाभ र आर्जित बोनस इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ ।
सानिमा लाइफले सानिमा दम्पती सावधिक जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । यो योजनामा न्यूनतम उमेर अवधि २१ वर्ष रहेको छ भने अधिकतम ५० वर्ष रहेको छ । यसको बीमा अवधि न्यूनतम १५ र अधिकतम ३० वर्ष रहेको छ । बीमा समाप्ति उमेर भने ७० वर्ष रहेको छ ।
यो योजनामा सहभागी हुनेले बीमा अवधिभित्र २ मध्ये १ बीमितको मृत्यु भएमा पुरै बीमाङ्क रकम प्रदान गर्न सकिने रहेको छ भने त्यसपछिको बीमा शुल्क भुक्तानीमा छुट दिने जनाएको छ ।
यस्तै बीमा अवधिभित्र अर्को बीमितको पनि मुत्यु भएमा पुरै बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस, बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म दुईमध्ये १ बीमितमात्र जीवित रहेमा थप पुरै बीमाङ्क र आर्जित बोनस प्रदान गरिने योजना रहेको छ । बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म दुवै बीमित जीवित रहेमा पुरै बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस भुक्तानी पाउने योजना रहेको छ ।
दम्पत्ति बीमामा कडाई गर्दै बीमा समिति, एउटाको आम्दानीले दुईजनाको प्रिमियम तिर्न नपाइने
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डका सीईओको तलब १५ लाख, छोराछोरीको फि देखि क्लब जाने खर्चपनि बैंकले नै दिने
‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ बैंकहरुको लागि यसकारण भयो जटिल: बैंकर मनोज ज्ञवाली